Legend Apex wuxuu imaan lahaa Android dhamaadka 2020 ugu horayn | Androidsis
Legend Apex wali waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan sanadkan. Ciyaar awood u leh inay istaagto cinwaannada sida Fortnite iyo PUBG. Ka dib markii lagu sii daayay kombiyuutarada, waxaa la xaqiijiyay in kulankaan waxay lahaan laheyd nooc u gaar ah Android. Inkasta oo abuurayaashu ay horeyba u shaaciyeen inaysan ku degdegin ku dhawaaqista. Si tartiib tartiib ah ayaan wax uga baranaynaa.
Waxaa mar kale la xaqiijiyay in Legend Apex waxaa loo sii deyn doonaa Android iyo iOS. In kasta oo sugitaanku wali sii dheeraan doono, haddana waa inaan sugno sannad run ah, illaa ciyaartan si rasmi ah loogu sii daayo barnaamijyada moobiilka. Sidaas ayey suurtagal ku noqotay in hadda la ogaado.
Waxaa lagu dhawaaqay in ciyaarta la heli doono sanad maaliyadeedka 2021. Sannad bilaabmaya Oktoobar 2020, sidaa darteed rajo wanaagsan, waxay u badan tahay dhamaadka 2020 Apex Legends ayaa la bilaabay loogu talagalay dadka isticmaala Android iyo iOS. Ma aha wax la xaqiijiyay, taariikhaha gaarka ah weli rasmi ahaan ma ahan.
Ciyaartu waxay noqoneysaa mid guuleysata, oo waliba si fiican suuqa uga socota. Waxay horey u leeyihiin in ka badan 70 milyan oo ciyaartoy adduunka oo dhan, sida dhawaan lagu dhawaaqay. Markaa waxay hanjabaad cad u tahay cinwaannada sida Fortnite ama PUBG.
Shirkadda hadda waxay diirada saareysaa keenista Legend Apex ee Android iyo iOS. Tani waa wax ay ka shaqeynayeen muddo bilo ah, in kastoo hadda ay sii kordheysay sumcaddeeda, maxaa yeelay ciyaarta ayaa durba dhistay mowqifkeeda goobaha kale. Waxay hadda rabaan inay ka guuleystaan ​​aagga mobilada.
Waxay u badan tahay, inaan wax badan ka ogaan doonno taariikhda la sii deynayo sannadka 2020. Ugu yaraan waxaan ognahay inay weli tahay muhiimadda shirkaddu inay soo bandhigto Legend Apex on Android iyo iOS. Kaliya sugitaanka ayaa wali xoogaa dheer, sida ugu dhakhsaha badan waxaan u heli doonnaa dhamaadka 2020.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Legend Apex ayaa imaan kara Android dhamaadka 2020